सर्वोच्चले भन्यो– डीआईजी प्रविन श्रेष्ठको सेवाअवधि किन नथपेको ? : RajdhaniDaily.com
HomeBreaking Newsसर्वोच्चले भन्यो– डीआईजी प्रविन श्रेष्ठको सेवाअवधि किन नथपेको ?
कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्चले श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा उनी केसी र पौडेलमध्येबाट हुने एक आईजीपछि सशस्त्रको आईजी बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न एमालेले तोक्यो सातै प्रदेशमा जिम्मेवारी
काठमाडौं । आन्तरिक विवाद मिलाउन गत २७ असारमा गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपा एमालेले प्रदेशमा नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । आन्तरिक विवाद समाधान...
भूकम्प र पुनर्निर्माणका कुरा